Kooxda Juventus oo heshiis cusub ka saxiixatay Leonardo Bonucci – Al-Hurriyah
MUQDISHO, NOVEMBER, 20, 2019 (ALHURRIYAH SPORT): Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday inay heshiis cusub ka saxiixatay goor dhow kabtan ku xigeenkeeda.
Juventus ayaa heshiis cusub oo gaarsiisan illaa sanadka 2024-ka waxa ay ka saxiixatay kabtan ku xigeenkeeda Leonardo Bonucci.
Kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa heshiis cusboonaysiintan ku xaqiijisay boggeeda rasmiga ah, waxaana ay sheegtay in Bonucci uu qandaraaska u kordhiyay kooxda xilli ciyaareedyo kale.
Daafacan dib ugu soo laabtay Bianconeri kaddib markii uu ka soo tagay Milan xagaagii 2018 ayaa door muhiim ah ka qaatay booskooda daafaca, iyagoo ku guuleystay markale Scudetto.
Waxaa loo soo dalacsiiyey doorka kabtannimo, halka Giorgio Chiellini uu ka soo kabsanayo dhaawac.
Heshiiskan cusub oo uu saxiixay 32-sano jirkaan ayaa kooxda ku sii hayn doona illaa uu ka gaarayo da’da 37-sano.
Dhinaca kale Sky Sport Italia ayaa warinaysa in kooxda Juventus Szczesny u cusbooneysiin doonto qandaraaskii uu kula joogay kooxdiisa illaa sanadka 2024-ka, halka ciyaaryanka reer kolombiya ee lagu magacaabo Cuadrado uu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiis ku eg ilaa sanadka 2022-ka, iyadoo ay jirto ikhtiyaar loo siinayo inay ku darsan karaan sanad dheeri ah.
H.E PRESIDENT FARMAAJO AND H.E PRESIDENT KENYATTA NORMALIZE SOMALIA-KENYA RELATIONS Nairobi, Nov. 14,…
Mogadishu, 31 Oct. 2019 (Al-Hurriyah News): The UN Secretary-General's Special Representative for Children…